किन कालो लगुन सिजन get प्राप्त गर्ने बढी सम्भावना छ - पालना दृश्य
by फ्रेंकी 6th डिसेम्बर 2020 9th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड किन कालो लगुन सिजनaप्राप्त गर्ने बढी सम्भावना छ
करीव एक बर्ष पहिले हामीले मौसममा एउटा लेख प्रकाशित गरेका थियौं कि कालो लगुन मौसम4पछि आउँदैन। जे भए पनि केहि नयाँ समाचारहरू प्रकाशमा आए पछि र हामीले केहि नयाँ विकासको बारेमा सिकेका छौं, हामी तपाईंलाई दोस्रो विचारमा तपाईका विचारहरू साझा गर्न चाहन्छौं, त्यसैले कृपया पढिरहनुहोस्। एनिम अनुकूलन मूल २०० 2006 मा जारी भयो, पछिल्लो OVA २०२० मा आउँछ।
अवलोकन - कालो लगूनले aतु प्राप्त गर्नेछ?
मौसम बुझ्न o ब्लैक लगून होइन एक 4तु प्राप्त हुन्छ हामीले पहिले केहि चीजहरूमा जानु पर्छ। हाल, ब्ल्याक लगून १० बर्षको अन्तरालमा रहेको छ, अहिलेसम्म कुनै नयाँ मौसमको धेरै स h्केत छैन। हामीसँग केवल नयाँ मौसमको अस्पष्ट, प्रमाण छ र यसमा डिसि in गर्नेमा ठूलो समस्या भएको छ यदि त्यहाँ seasonतुको मौसम हुनेछ र भविष्यवाणी गर्ने यो कहिले प्रसारित हुनेछ। मैले नेटफ्लिक्स र ब्ल्याक लगुनको उत्पादन कम्पनीमा हेर्न समय लिए (पागल घर) anime adaptions भविष्य के हो हेर्न अझ राम्रोसँग।
OVA, रोबर्टाको रगत ट्रेल एक OVA थियो किनकि मैले उल्लेख गरेको छु र केवल ep भागहरू, प्रत्येक आधा घण्टा लामो फिचर गर्दछ। रोबर्टाको रक्त ट्रेलको अन्त्य धेरै अपूर्ण थियो र हामीले अघिल्लो लेखमा पनि उल्लेख गरेका थियौं। यसले फ्यानहरूलाई पर्खिरहेको अवस्थामा छोडिदियो जबकि कालो लगुनले १० बर्षको अन्तरालमा लग्यो। त्यसोभए त्यहाँ कालो लगून seasonतु5हुनेछ? र किन यो अब पहिले भन्दा बढी संभावना छ?
रोबर्टाको रगत ट्रेलको अन्त्य बुझ्दै - कालो लगुनले seasonतु पाउनेछ?
कालो लगुनको OVA को अन्त्य, रोबर्टाको रगत ट्रेल भनिन्छ हाम्रो मुख्य पात्रहरु, विशेष गरी रक र रेभिको सम्बन्धमा एक धेरै नै नमिल्ने अन्त भयो। हामीले देख्यौं (एपिसोडको अन्त्यमा) र्यावी र रक दुबैले भएका घटनाहरूबारे विचार गरिरहेका थिए। हामीले रक पनि समावेश भएको एक रोचक र धेरै राम्रो (मेरो विचारमा) चरित्र चाप देख्यौं। रकको चरित्रले उनी रोबर्टाको रगत ट्रेलको एपिसोड his मा एपिसोड १ मा कसरी हालको राज्यमा थिए भनेर कसरी आश्चर्यजनक परिवर्तन देख्दछन्। यो एक महाकाव्य चरित्र चाप र एक हो जुन म अझै सम्म यस दिनको लागि प्रशंसा गर्छु। तर कसरी नयाँ मौसम प्रभाव मौसमको अन्त्य हुन्छ वा कालो लगुन एक मौसम get प्राप्त गर्दछ? त्यो धेरै शीर्षकहरू मध्ये एक हो जुन म यो लेखमा कभर गर्दै छु त्यसैले पढ्न जारी राख्नुहोस्।
अघिल्लो लेखको निरन्तरता - कालो लगूनले seasonतु प्राप्त गर्नेछ?
हामी सब भन्दा महत्वपूर्ण समाचारमा पुग्नु भन्दा पहिले म ब्लक लगुन हो र यसको एक सीजन 4. प्राप्त गर्ने सम्भावनाको कारणको लागि संक्षिप्तमा जान चाहन्छु। तपाईं मूल लेख पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ। हामीले पहिले भनेका थियौं:
"यो एक प्रख्यात तथ्य हो कि निश्चित एनिमेज श्रृंखलाहरू जस्तै पूर्ण मेटल पैनिक, क्लान्नाड र ब्ल्याक लगून पनि लामो समयको लागि अन्तरालमा जान्छन्, कहिलेकाँही १० वर्ष सम्म। र पूर्ण धातु आतंकको साथ यस्तो भयो "
त्यसोभए किन यो महत्त्वपूर्ण छ र यसले कसरी मौसममा असर गर्दछ ब्ल्याक लगूनले मौसम4वा पाउनेछैन? यसको कारण यो छ कि यदि पूर्ण मेटल पैनिक जस्ता एनिमेसनले यो गर्न सक्दछ भने किन ब्ल्याक लगून होइन, जसमा सामान्यतया उस्तै प्रशंसक आधार हुन्छ यदि ठूलो श्रोता होईन। OVA को अन्त्यलाई ध्यानमा राख्दै किन यस्तो कुरा फैलिएको छ: कालो लगुन, रोबर्टाको रगत ट्रेल।
हामीले यो पनि भन्यौं:
"कालो लगूनमा दुई मुख्य सीजनहरू थिए र एउटा OVA। सीजन १ "कालो लगुन" जसमा १२ एपिसोडहरू र सीजन २ "कालो लगुन, दोस्रो ब्यारेज" फिचर गरिएको थियो। यस श्रृंखलामा पछि OVA थियो "रोबर्टाको रक्त पथ, दुर्भाग्यवश केवल ep एपिसोड मात्र प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यहाँ मूल मa्गाको अरू धेरै खण्डहरू लेखिए पछि। "
हामीले पहिले उल्लेख गरेका we मुख्य कारणहरू - कालो लगूनले seasonतु प्राप्त गर्नेछ?
1। सर्वप्रथम, कालो लगूनको एनिमेस अनुकूलनको कुनै पनि अर्को सीजनहरूको लागि स्रोत सामग्री छ र पहिले नै उनीहरूले एक सीजन or वा consider छलफल गरे पनि लेखिएको हुन्छ यदि तपाईंले गणना गर्नुभयो भने OVA एक मौसम को रूप मा। यसको हामी के भन्न खोज्दैछौं, यो हो कि त्यहाँ कुनै पनि स्टुडियोलाई रोक्न केही छैन, मात्र होईन महोदय कालो लगुनको अधिक सिजनहरू बनाउनबाट।
2। ब्ल्याक लगून प्रशंसक र आलोचकहरूमाझ धेरै मन पराइन्छ, र कुनै पनि स्टुडियो र केवल माडहाउसले कालो लगुनको अर्को सीजनको उत्पादन जारी राख्न वा लिने छनौट गर्ने धेरै नै सम्भावना कम छ। सामान्यतया, यदि Madhouse anime को उत्पादन जारी छैन, अर्को स्टूडियो हुनेछ। यो केवल यसलाई आर्थिक रूपमा कती बनाउने हो, र यो लोकप्रियता हो।
3। कालो लगूनको सबैभन्दा भर्खरको एपिसोडको मेरो रायमा निर्णायक अन्त्य थिएन। यदि तपाईंले अन्त्य देख्नु भएको छ भने तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ कि म के भनिरहेछु, एक तरिकामा, यो एक प्रकारको चट्टान-ह्याn्गर हो। अब के हुन्छ? कथा कहाँ जान्छ? मलाई लाग्छ कि उत्पादकहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरूले अर्को सीजन पाउनेछन् र मलाई लाग्छ कि किन त्यसैले उनीहरूले यस तरीकाले यसलाई अन्त्य गर्ने छनौट गरे। यदि तपाईंले मa्गा पढ्नु भएको छ भने तपाईंले मेरो अर्थ के बुझ्नुहुनेछ।
4. OVA रोबर्टाको रगत ट्रेलबाट अन्तिम ब्ल्याक लैगुन एपिसोड २०११ मा जारी गरिएको थियो। यसले कसैलाई यो फेला पार्न सक्छ किनकि यसले एनिमेस अनुकूलन पूर्ण रूपमा बन्द हुने सम्भावनालाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ। यद्यपि तपाई यस कुरामा चिन्तित हुनुहुन्न। पूर्ण धातु आतंक (जसमा asonsतुहरू थिए) ले १० बर्षको अन्तरालमा लग्यो जुन अर्को स्टुडियोले अपनाएको भन्दा अघि बढ्यो जुन मौसम 2011 बाट छोडियो। त्यसकारण तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि मौसम or वा depending मा निर्भर गर्दै तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ केवल सम्भव छैन, तर सम्भावना पनि छ।
पागल घर को विश्लेषण - कालो लागून एक मौसम4प्राप्त गर्नेछ?
यी कारणहरूमा खराब हेर्दै तिनीहरू सभ्य छन् तर उनीहरूसँग जानकारीको मौलिक खण्डको अभाव थियो पहिले पहुँच थिएन, साथै अर्को कुरा मैले याद गरेन र अहिले सम्म जुन धेरै महत्त्वपूर्ण साबित भयो। मैले निर्माण कम्पनीमा जानका लागि पनि समय लिएँ पागल घर जो चार्जमा थिए र अझै ब्ल्याक लगुनको उत्पादन र रिलिजको जिम्मामा छन्। पागल घर १ 1972 XNUMX२ मा ex– द्वारा स्थापित भयोमुशी उत्पादन एनिमेटरहरू।
व्यवसायको मामलामा स्टुडियोले करीव employees० जना कामदारहरूलाई रोजगार दिन्छ, रोजगारीको स्तरमा हाल उत्पादनहरूको संख्याको आधारमा भिन्नता हुन्छ। थप रूपमा, कम्पनीले यसमा लगानी गरेको छ कोरियाली एनिमेसन स्टुडियो DR चलचित्र। म्याडहाउसको सहायक कम्पनी, म्याडबक्स कं, लिमिटेड रहेको छ जुन मुख्यतया कम्प्युटर ग्राफिक्समा केन्द्रित छ।
पागलखानाले केही अन्य कम्पनीहरूको स्थापना गरेको छ र यसको स्थापना पनि years 48 बर्ष पहिले नै भएको थियो। तसर्थ, म निष्कर्षमा पुग्न सक्छु तिनीहरू एक सफल उत्पादन कम्पनी हो। तिनीहरू आफ्नो नाममा कामहरूको लामो सूचीको साथ एक स्थिर कम्पनी देखिन्छ। हामी भन्छौ कि तिनीहरू दिवालिया हुने वा अन्य कुनै वित्तीय समस्याको जोखिममा छैनन्। तिनीहरू अधिक debtणमुक्त भएकाले पनि उनीहरूले यो पैसा भविष्यमा अन्य परियोजनाहरू फाइनान्समा लिन सक्दछन् जुन मेरो जोखिमपूर्ण हो, तर जसले रोयल्टी र बिक्रीको रूपमा पनि उच्च इनाम प्रदान गर्दछ।
केहि थप जानकारी - कालो लगूनले seasonतु प्राप्त गर्नेछ?
अब यो तपाइँलाई थाहा पाउँदा चकित हुन सक्छ तर नेटफ्लिक्सले केही समय अघि फनिमेसनको स्ट्रिमिंग अधिकारहरू किन्नुभयो। धेरै व्यक्तिहरू जसले फ्यामेन्सनमा कालो लगुन मूल रूपमा हेरेका थिए जुन यो फिनिमेसनमा थियो भनेर सम्झन सक्छ। ठिक छ, यो अब छैन। त्यहाँ यसको लागि एक सरल कारण छ र मैले यसलाई माथि उल्लेख गरिसकें। नेटफ्लिक्सले फनिमेसनको स्ट्रिमिंग अधिकार खरीद गर्यो ताकि तिनीहरूले मात्र यसलाई होस्ट गर्न सक्दछन्। मलाई लाग्छ कि यो केहि अन्य प्लेटफर्महरूमा हुन सक्छ तर म निश्चित छैन। जे भए पनि किन यो महत्वपूर्ण छ? ठिक छ किनभने मलाई लाग्छ नेटफ्लिक्सले यो २ कारणले गरेको हो, जुन म अर्को भागमा आउनेछु।
म नेट्लिक्सको एनिमेज लाइब्रेरीको न्याय गर्न स्थितिमा छैन र तपाईलाई मौसम राम्रो छ वा छैन बताउँछ। के म तपाईंलाई भन्न सक्दछु कि यो धेरै धेरै विस्तार हुँदैछ र यो पहिले जस्तो ठूलो छैन। नेटफ्लिक्सले ब्ल्याक लगुनलाई स्ट्रीमि rights अधिकारहरू ब्यापार उद्यमको रूपमा किनेको छ, जोखिममा नरहेको आफ्नो पूँजीलाई ध्यानमा राख्दै, तर व्यापार उद्यम पनि कम हो।
उनीहरू जान्दछन् कि यसले तिनीहरूको लाइब्रेरी सुधार गर्दछ, र यसले अधिक व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको स्ट्रिमिंग प्लेटफर्म जाँच गर्न कारण दिन्छ, तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, तिनीहरूको एनिमे सेक्सन। कालो लगुनको लागि एस अधिकार खरीद गर्दा उनीहरूलाई धेरै फाइदा हुने थियो, त्यहाँ त्यहाँ अर्को तरिका पनि यसले उनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ र हामी तल प्राप्त गर्दैछौं।
दोस्रो कारण के हो भनेर भन्नु अघि म तपाईंलाई पहिले "नेटफ्लिक्स ओरिजिनल" शब्दको अर्थ के हो भनेर बुझ्न चाहन्छु किनकी यसको चार अर्थ हुन्छ जुन यस लेखको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो र अनुमान मौसममा वा ब्ल्याक लगूनले पाउने छैन। एक मौसम4वा छैन। नेटफ्लिक्सका अनुसार शब्द "नेटफ्लिक्स ओरिजिनल" को अर्थ चार चीज मध्ये एक हो:
नेटफ्लिक्स कमिश्न गरियो र शोको निर्माण गर्‍यो
नेटफ्लिक्ससँग यस कार्यक्रममा विशेष अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्रिमि rights अधिकारहरू छन्
नेटफ्लिक्सले अर्को नेटवर्कको साथ कार्यक्रमको सह-उत्पादन गरेको छ
यो पहिले रद्द गरिएको शोको एक निरन्तरता हो
त्यसोभए तपाईले देख्न सक्नुहुने यी शब्दहरूका चार अर्थहरू छन्। त्यसोभए किन यो मौसमको लागि महत्वपूर्ण छ वा न कालो ल्यागुनले getतुको मौसम पाउनेछ कि हुँदैन? किनभने नेटफ्लिक्सको आफैंमा ईतिहास निर्माण वा कार्यहरू जारी रहेको छ जुन केहि कारणले रोकियो। पछि म एक लोकप्रिय एनिमेसको एक धेरै राम्रो उदाहरण देखाउने छु जुन नेटफ्लिक्सले नछोडेसम्म र अर्को २ सीजनहरूको लागि पैसा उपलब्ध नगरेसम्म पैसाको समस्याको कारण रोकियो।
त्यसोभए मूलतः हामी यहाँ के पाउँदैछौं भने केहि एनिमे जोसँग कुनै कारणले उत्पादन रोकिदिएका छन र कुनै कारणका कारण संख्यामा नेटफ्लिक्स मूलमा ट्युन गर्न सकिन्छ, के उनीहरुलाई अनुदान दिइनेछ र यसको परिणाम स्वरूप अन्य सेवाहरु दिइनेछ। यो कालो लगुनको सिजन। को लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ
उदाहरण - कालो लागून एक मौसम4प्राप्त गर्नेछ?
अब मैले माथि उल्लेख गरिरहेको उदाहरण एक लोकप्रिय एनिमे हो, म निश्चित छु तपाईंले कल गरेको सुन्नुभएको छ काकेगुइरी। काकगुइरीले नेटफ्लिक्सबाट प्राप्त कोषका लागि धेरै सफलता देख्यो र यसको परिणाम स्वरूप यसले यसको पखेटा फैलाउन सक्षम भयो। अब मलाई लाग्छ कि तपाईले म यहाँ के गर्दैछु भन्ने महसुस गर्न थाल्नु हुनेछ, हामी त्यसमा जानु भन्दा पहिले म Kakeguirui लाई पहिलो स्थानमा यस मौका दिएको कारणको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यी नेटफ्लिक्स मूलहरू चाखलाग्दो छन् किनकि उनीहरूले उत्पादन कोष दिए जुन शुरूमा सबै सँगै बन्द भए। किन यो महत्त्वपूर्ण छ? यसको मतलब नेटफ्लिक्स फन्डिंग प्रोजेक्टहरूको लागि कुनै अपरिचित होइन जो राम्रो आरओआई पनि हुन सक्दैन, (लगानी पुन: निवेश) तर उनीहरू जे भए पनि यो गर्न इच्छुक छन्।
उदाहरण को व्याख्या - कालो लगुन एक मौसम4प्राप्त गर्नेछ?
अब कारण उदाहरण माथी महत्वपूर्ण थियो किनभने यो म सिद्धान्त लाई समर्थन गर्छ म कालो लागून र नेटफ्लिक्स को बारे मा। मन, यो केवल एक सिद्धान्त हो, जे होस् म यो मेरो छातीबाट हटाउन चाहान्छु। मेरो सिद्धान्त यो हो कि नेटफ्लिक्सले स्वतन्त्र रूपमा कालो लगुनको चौथो सिजन फन्ड गर्दछ। यो मा विचार गर्न के यो यति ठूलो तान्न छ, जब हामी माथिको मा मैले छलफल गरेका सबै कुरा ले? मलाई लाग्दैन कि यो हो, यसैले मैले यो लेख लेख्ने छनौट गरे, किनकि मसँग पहिले लेखेको कुरा अपडेट गर्न नयाँ सामग्री थियो।
निष्कर्ष - कालो लगूनले aतु प्राप्त गर्नेछ?
तर्कबाट तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो स्पष्ट छ कि मूल लेखलाई केही थप जानकारी चाहिन्छ जुन हामी पहिले आइसकेका थिएनौं। यसैले हामीले सोचे कि यो महत्त्वपूर्ण थियो र थप्न आवश्यक छ। हामी २ नयाँ कारणहरू पार ग why्यौं किन हामी सोच्छौं कि कालो लगुनको सिजन2सम्भव छ। यो थप जानकारी हामीले थपेका छौं एनिमे ब्ल्याक लगुनको भविष्यको बारेमा हाम्रो सिद्धान्तलाई सुदृढ पार्न।
यो थप जानकारी हामीले थपेका छौं एनिमे ब्ल्याक लगुनको भविष्यको बारेमा हाम्रो सिद्धान्तलाई सुदृढ पार्न। यस्तो सम्भावना धेरै छ कि यदि कुनै पनि उत्पादन कम्पनीले ब्ल्याक लगुनको नयाँ सिजन लिन लागेको छ भने यसलाई नेटफ्लिक्स द्वारा लगानी हुने छ। हामी माथिका कारणले यो विश्वास गर्दछौं। त्यसकारण नेटफ्लिक्सले अब अधिकार प्राप्त गरेकोले aतु get प्राप्त गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
हामीले प्रदान गरेको जानकारी वा समाचार वास्तविक छन् र ती श्रृंखलाका दर्शकहरूलाई एनिमे ब्ल्याक लगुनको साथ के हुन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्ने छ। हामी अहिलेको लागि यति मात्र भन्न सक्छौं र हामी आशा गर्दछौं कि यस लेखले तपाईंलाई यस्तो गर्न सोचे जस्तो बुझ्न मद्दत गरेको छ। यो लेखले तपाईंलाई माथिका तथ्यहरू बाहेक अरू केही कुरा बताइरहेको छैन, जस्तो कि हामीले अघिल्लो लेखमा एनिमेज उद्योग एक अप्रत्याशित हो र हामीलाई कालो लगूनको सम्बन्धमा के हुन्छ भनेर केही पनि थाहा छैन, हामी केवल हामीलाई थाहा भएका तथ्यहरूमा जान सक्छौं र हामीले पत्ता लगाएका नयाँ सूचनाहरू।
के तपाईं मर्न-कडा कालो लगुन प्रशंसक हुनुहुन्छ?
यी उत्पादनहरू जाँच गर्न विचार गर्नुहोस्:
स्क्रीन एनिम मार्च २०२१ लाईन-अपले लाइभ-एक्शन टोकियो घोल फिल्म र अधिक धेरै थप्दछ!
टैग: कालो लगून कालोगुन ब्ल्याकलेग्नवेसन ब्ल्याकलेगुनवेसनसोंडेट ब्ल्याकलागुनवसेसनरेलिडेट कालोजुनोननेटफ्लिक्स blacklagoonseason4 blacklagoonseason4 article ब्ल्याकलैगूनका लागि जारी गरियो सिजन4ब्ल्याकलेगून सिजन4रिलिज गरिएको कालागोन whenwillblacklagoonseason4re कृपया
अघिल्लो प्रविष्टि के7बीज मूल्यवान छ?
अर्को प्रविष्टि Quintessential Quintuplet - सीजन2प्रीमियर मिति